Jereo ny antsipiriany rehetra amin'ny Katedraly León | Vaovao momba ny dia
Androany isika dia hiresaka momba ny iray amin'ireo katedraly manan-danja indrindra any Espana, izay eo amin'ny Camino de Santiago ihany koa, ka mpivahiny marobe an'arivony isan-taona no mitsidika azy. Ity katedraly manaitra ity dia asan'ny Gothic ary tena manan-danja tokoa amin'io lafiny io, satria izy io dia iray amin'ireo asa lehibe voatahiry eto amin'ny firenentsika amin'ity fomba ity.
Ity iray ity Ny Katedraly dia fantatra amin'ny anarana hoe La Bella Leonesa ary miaina mifanaraka amin'ny anarany. Izy io dia iray amin'ireo fanehoana avo indrindra an'ny Gothic, izay nampihena ny rindrina araka izay tratra, raha oharina amin'ny fomba matanjaka izay nanjakazaka tamin'ny Romanesque, miaraka amin'ny fahatsapana ny haavony noho ny haingo.
1 Tantaran'ny Katedraly León
2 Exterior ny katedraly
3 Atin'ny katedraly
Tantaran'ny Katedraly León
Naorina teo ambonin'ny a ambonin'izay nisy fandroana romanina, izay nibodo sehatra lehibe kokoa noho ny onenan'ny katedraly ankehitriny. Lava ny tantarany, satria nandritra ny fotoana nanjakan'ny Kristiana dia nopotehina ireo fandroana ireo ary teo amin'ny toerany dia natsangana ny lapan'i Ordoño II. Tamin'ny fandreseny ny Arabo dia nanapa-kevitra ny hanangana tempoly ity mpanjaka ity fa tsy ny lapan'andriana hivavaka amin'Andriamanitra satria nanome azy izany fandresena izany. Tsy misy firaketana an'io tempoly io amin'ny endriny, saingy tsy maintsy naka tahaka ireo izay natao tamin'ny manodidina tamin'ny taonjato 1073. Taorian'ny fikomiana sy ny ady dia navela rava ity katedraly ity. I Fernando I de León no hifantoka amin'ny fanarenana ny katedraly miaraka amin'ny fanampian'i Doña Urraca. Amin'ity tranga ity, ny katedraly dia haorina amin'ny fomba Romanesque izay nanjaka tamin'izany fotoana izany, natokana tamin'ny XNUMX.
Tao amin'ny Taonjato faha-XNUMX rehefa nanomboka ny fananganana ny katedraly Gothic izay fantatsika anio. Ity katedraly ity dia toa noforonin'ireo mpanao mari-trano frantsay satria toa ny teo alohany, ny Katedraly Burgos, izy no manana ny drafitry ny katedraly Reims. Ity katedraly ity dia nisy fanavaozana sy fandaminana marobe, satria ny rafitra sarotra izay nitadiavana ny hialana amin'ny rindrina lehibe ary hamorona tontolo feno hazavana dia niteraka olana arafitra rehefa nanohana ilay firafitra. Niampy izany ny fahasahiranan'ny tany, izay tsy milamina ary niaritra fananganana maro teo aloha.
Exterior ny katedraly
Iray amin'ireo faritra manaitra sy fantatra indrindra amin'ity katedraly ity ny fisalasalana. Ny ivelany dia mampiseho fa ny fomba Gothic amin'ny teboka rehetra. ny ny lafiny andrefana dia misy tilikambo gothika roa manana haavo 65 sy 68 metatra ny halavany, noho izany dia hita fa tsy simetrika tanteraka izy ireo, satria tamin'ny fotoana samy hafa no nananganana azy. Ny Bell Tower no voalohany ary ny Clock Tower dia natsangana efa ho zato taona taty aoriana. Ny portico telo heny ambanin'ny tilikambo dia tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Ireo eo ankilany dia natokana ho an'i Saint John the Baptist sy Saint Francis ary ilay eo afovoany dia natokana ho an'ny Fitsarana Farany. Ao amin'ireo porticoes ireo dia azonao atao ny mahita ireo sary sokitra an'ny mpanjaka sy apôstôly, asa lehibe voasokitra amin'ny vato izay tafavoaka tamin'ny fandehan'ny fotoana. Etsy ambonin'ny portico no misy ny varavarankely raozy manaitra miaraka amin'ny vera voaloto tamin'ny taonjato faha-XNUMX.
Ao amin'ny Fatsimo achada dia afaka mahita portico vitsivitsy ihany koa ianao zava-dehibe. Ny vavahadin'ny Fahafatesana dia nomena anarana noho ny fisehoana ny taolana misy elatra. Ao afovoany, antsoina hoe Sarmental, no endrik'i Kristy. Eo amin'ny ilany ankavanana dia ny Pórtico de San Froilán, miaraka amin'ny sary natokana ho an'ity olo-masina ity.
Ny atin'ny katedraly dia fantatra amin'ny anarana hoe House of Light ary ho hitantsika ny antony rehefa miditra. ny Varavarankely fitaratra miloko 125 mameno hazavana ny zava-drehetra, zavatra izay tsy azo atao any amin'ny katedraly Romanesque izay misy rindrina matevina izay tsy mamela ny hazavana handalo amin'ny fomba mitovy amin'ny fomba Gothic madio indrindra. Avy amin'ny varavarankely raozy ka hatramin'ny fitaratra miloko eo amin'ny rindrina, dia misy teboka jiro maro izay manao azy ho katedraly misokatra.
El antoko mpihira tokana no tranainy indrindra any Espana rehetra. Sarobidy io ary voasokitra amin'ny hazo. Mpanakanto Flemish tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Ny sombin-kazo hita teo amin'ny Alitara Main dia nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX ihany koa, maneho ny fiainan'i Saint Froilán. Ity katedraly ity koa dia manana trano fiangonana maromaro.
Na dia amin'ny ankapobeny aza ny katedraly dia noforonina tsy nisy jirofoFarany, vita izany, namita azy tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Manodidina ny tranom-baravarana dia misy efitrano sasany, ao anatin'izany ny Cat Museum Museum.
Zavatra iray hafa azo tsidihina ao amin'ity katedraly ity ny crypt izay itehirizana ny razana ny fandroana romanina taloha. Ireo taolam-paty dia hita tamin'ny 1996 ka zavatra vao tsy ela akory izay, ary mamela antsika hahafantatra bebe kokoa momba ny tantaran'ny katedraly. Eo anoloana ny atsimo amin'ny katedraly no misy azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » León » Katedraly Leon
Auschwitz, ilay horohoro tantara